जनताले रामचन्द्र पाैडेलकाे बिकल्प खोजीरहेका छन् : श्रेष्ठ – Khabar batika
कृष्णकुमार श्रेष्ठ ‘किसान’ तनहुँ क्षेत्र नं .१ बाटबामगठबन्धनका तर्फबाट चुनावी मैदानमा उत्रिएका छन् । तनहुँलाई औद्योगिक, शैक्षिक, स्वास्थ्य, सांस्कृतिक र विकासको पुर्वाधारमा नमुना बनाउने योजना लिएर चुनाबी मैदानमा होमिएका श्रेष्ठसंग खबरवाटिका डटकमले लिएको अन्तर्वाता ।
खबरवाटिका: चुनावी अभियान कस्तो चल्दै छ ?
उम्मेदबार श्रेष्ठ : प्रतिनिधी सभा सदस्यको निर्वाचन पनि नजिकै आइसक्यो । अहिले पनि चुनावी अभियान अन्र्तगत मतदाताको घरदैलोमा र सभा सम्मेलनमा नै व्यस्त छौ । बाम गठबन्धनको साँझा उम्मेदवारको रुपमा मेरो उम्मेदबारी भएकोले यसपाली नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रका पार्टीका सबै तहका कार्यकर्ताहरु चुनावी अभियानमा नै लागि परिरहनु भएको छ ।
खबरवाटिका : घरदैलोमा जादाँ जनताको समस्या के पाउनुभयो त ?
उम्मेदबार श्रेष्ठ: तनहुँ जिल्ला राजधानी काठमाण्डौको नजिकै भएता पनि यहाँका गाउँहरु दुर्गम जिल्लाका भन्दा कम छैनन् । व्यास नगरपालिकाको वडा नंं. ९, रिस्तीका विभिन्न गाउँका जनता अहिले पनि बिरामी हुदाँ सिटामोल खान सदरमुकाम दमौली आउनुपर्ने बाध्यता छ । कोटा, छिपछिपेका जनता एउटा पक्की पुल नहुदाँ यातयातमा कठिनाई झेल्नु परेको छ । घुमाउनेमा पक्की पुल नहुदाँ समस्या छ । गाउँमा जनताको ठूला समस्या केही छैन । यातायात, खानेपानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारीकै समस्याहरु छन् ।
खबरवाटिका: तपाईको प्रतिद्धन्द्धीको रुपमा नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल हुनुहुन्छ । उहाँले गर्न नसकेको विकास तपाईले कसरी गर्न सक्नुहुन्छ ?
उम्मेदबार श्रेष्ठ: बिकास गर्ने पदले होइन मनले हो । बिकास गर्ने चहाना राखियो भने यस क्षेत्रको बिकास सजिलै सम्भव छ । साबिक तनहुँ २ बाट यसअघि नेतृत्व गर्नु हुने मेरा प्रतिद्धन्द्धी रामचन्द्र पौडेलले यस क्षेत्रको बिकासमा कुनै पनि चासो देखाउनु भएन । बिकासप्रति चासो देखाउनु भएको भए जनताले बिकल्प खोज्ने थिएनन् । अहिले तनहुँका जनताले रामचन्द्र पौडेलको बिकल्प खोजीरहेका छन् । जनप्रतिनिधी बन्नु भनेको जनताको सेवा गर्नका लागि हो आफ्नो पद र स्वार्थका लागि होइन ।
खबरवाटिका: तनहुँ १ को चुनावी मतपरिणाम कस्तो आकलण गर्नु भएको छ त ?
उम्मेदबार श्रेष्ठ : प्रतिनिधी सभा सदस्यको निर्वाचन पनि नजिकै आइसक्यो । अहिले पनि चुनावी अभियान अन्र्तगत मतदाताको घरदैलोमा नै व्यस्त छु । बाम गठबन्धनको साँझा उम्मेदवारको रुपमा मेरो उम्मेदबारी भएकोले यसपाली नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रका साथीहरु पनि सक्रिय रुपमा लागि पर्नु भएको छ । नेपाली कांग्रेसका कार्यकर्ताहरुको बर्षौ देखीको बिकास निर्माणको चाहाना अधुरै छ । यसपालीको निर्वाचनमा ४ हजार भन्दा बढि मतान्तरले मैले जित्छु ।
प्रदीपलाई प्रेममा परेकाे अाभाष
काठमाण्डाै – अष्ट्रेलियालाई कार्यक्षेत्र बनाएका गायक प्रदीप रानाभाटले प्रेममा परेछु बाेलकाे गीत बजारमा ल्याएका छन् । Post Views: 109 Read More
प्रथम लायन्स महाेत्सवकाे प्रचण्डले उदघाटन गर्ने
शुक्लागण्डकी–अागमी असाेज १९ गतेदेखी शुरू हुने प्रथम शुक्लागण्डकी लायन्स महाेत्सवकाे नेकपा कम्युनिष्ट पार्टीका अध्यक्ष एवं पुर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले उदघाटन गर्ने भएका छन् । ‘सामाजिक Post Views: 120 Read More
विद्यार्थीले थुने टीयूका २५ प्राध्यापक
काठमाडौं – त्रिभुवन विश्वविद्यालयको शिक्षा संकायका विद्यार्थीले पढाई नियमित हुनपर्ने भन्दै विभागीय प्रमुखसहितका प्राध्यापकलाई थुनेका छन् । Post Views: 126 Read More
भदौ २६ देखि कुरिनटारमा इच्छाकामना महोत्सव हुदै
चितवन चितवनको इच्छाकामना गाउपालिकाको वडा नं ४ कुरिनटारमा यही भदौ २६ गतेवाट प्रथम इच्छाकामना महोत्सव आयोजना हुने भएको छ । उद्योग वाणिज्य Post Views: 125 Read More